uNelson no Winie Mandela bavakashela eWhite House
uNelson no Winnie Mandela bavakashela eWhite House
uNelson no Winnie Mandela bezihambela bezipholele engadini yase White House beno Mongameli uGeorge Bush nowakwakhe uBarbara Bush.
Ngemuva kokukhululwa kwakhe ejele, uMandela wathatha uhambo lokuzungeza amazwe omhlaba lwamasonto ayisithupha kubalwa ne United States ukuyobungaza ukukhululwa kwakhe ekuvalelweni aphinde ahlangane nabaholi kanye nokwabelana ngamasu ngezepolitiki nezomnotho. Yena nomkakhe uWinnie Mandela bahambela eWashington D.C ukuyohlangana noMongameli uGeorge Bush nowakwakhe uBarbara Bush ezindlini zombuso i-White house. Kwakungumcimbi obalulekile nomkhulu nowasiza ukubumba iNingizimu Afrika kanye ne Melika ekubeni nobudlelwano nokuzwana.
uMadiba wavakashela iNewYork eBoston, Atlanta, Detroit, Los Angeles kanye nase Oakland ukuyonxenxa izimali ze African National Congress (ANC) waphinde wavakashela izikole, wahambela amarali wazungeza nezwe ayekulo. Uhambo luka Mndela kwelase Melika laholela ukwesekela ubudlelwano obuhle lwavula nemithombo yobuhle kumholi oqavile wase Ningizimu Afrika.
“Enye yezinto engazifunda ngsikhathi ngikwizingxoxo ukuthi kuze kube mina uqobo ngiyashintsha angeke ngishintsha abanye abantu.” ~ Nelson Mandela